Puntland oo ku gacansayrtay samaynta Shillin Somali cusub, kuna hanjabtay in ay ka hortagayso socodsiinteeda. – Radio Daljir
Puntland oo ku gacansayrtay samaynta Shillin Somali cusub, kuna hanjabtay in ay ka hortagayso socodsiinteeda.
Garowe, Jan 19 ? Dawladda Puntland ayaa si kulul uga hortimid qorshaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ay ku damacsan tahay in ay ku soo daabacato lacag cusub oo shilin Soomaali ah, taasi oo badali doonta midda haatan shaqaysa.
Puntland tallaabadaasi waxay ku tilmaantay in ay tahay mid aan laga fara buuxsan oo ku kooban oo kaliya khaqsiyaad gaar ah oo wata dano ay iyagu leeyihiin, kuwaasi oo damacsan in ay khalkhaliyaan dhaqaalaha dalka ee taagta daran, sidoo kalana doonaya in ay jeebabka ku shubtaan hantida dadka shacabka ah ee ka daalay dhibaatooyinka colaadeed.
Dawladda Puntland, waxay sheegtay qorshaha lacagtaasi lagu samaynayo in uu yahay mid dalka iyo dadkaba u horseedaya sicir barar iyo dhaqaale burbur hor leh oo soo wajaha dadka Soomaaliyeed, oo horay ula daalaa dhacayey dhaqaalo xumo sicir barar isku-kaashaday.
Wasiirka maaliyadda ee dawladda Puntland Faarax Cali Shire oo u warramay idaacadda BBC-da ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hindisaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ay ku haaminayso in ay ku soo daabacdo lacag shilin Soomaaliya, taasi oo wasiirku uu carabka ku dhuftay in aan loo marin waddadii saxda ahayd lacag samaysashada.
Wasiirku, waxaa uu intaasi ku daray hindisahaasi in uu yahay mid indho la?aan ah oo shaqsiyaad aragti gaaban ay fakareen, oo aan laga tashan shacabka Soomaaliyeed, ganacsata oo hadda ah cidda gacanta ku haysa dhaqaalaha Soomaaliya, baarlamaankii shacabku doorteen iyo waliba saraakiishii bangiga dhexe ee Soomaaliya oo loo baahnaa in ay ka dhaxmuuqdaan qorshaha lagu samaynayo lacag cusub, kuwaasi oo dhammaantood aan laga talo galin tallaabada lacag daabacidda.
Md. Shire, wasiirka maaliyadda ee dawladda Puntland waxaa uu carabka ku adkeeyey, kuna hanjabay dawladda Puntland in ay aysan marnaba raalli ka noqon doonin lacagtaasi, isla markaana aysan u ogalaan doonin in ay soo gasho deegaannada Puntland.
Hadalka dawladda Puntland ee diidmada lacagtaasi cusub, ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii shalay ahayd golaha xukuumadda dawladda Soomaaliya ay ansixiyeen hindisaha samaysinka lacag cusub, taasi oo in muddo ah ku taamaysay dawladda m/weyne Shariif.
C/fifataax Cumar Geeddi,